यी महिलाले १२ वर्षअघि नै गरेकि थिइन् कोरोना भा’इरसबारे ड,र,ला,ग्दो भविष्यवाणी ! – " सुलभ खबर "
यी महिलाले १२ वर्षअघि नै गरेकि थिइन् कोरोना भा’इरसबारे ड,र,ला,ग्दो भविष्यवाणी !
उनी आफूलाई अ,लौ,कि,क शक्ति भएको नारी मान्थिन् । भविष्यवाणी गरिएका पुस्तक लेख्थिन् ।कोरोना भाइर’सबारे १२ वर्ष अघि गरिएको भविष्यवाणी सत्य सावित भएको छ । सन् २०१२ मा प्रकाशित ‘इन्ड अफ डेज’ पुस्तकमा निमो’निया जस्तै खत’रनाक रोग सन् २०२० मा फैलन भनिएको थियो । पुस्तकमा फो’क्सोमा अ’सर गर्ने र नि’मोनिया जस्तै रोगको संक्र’मण फैलन भनिएको थियो । यस्तो भविष्यवाणी गरिएको पुस्तक लेख्ने लेखिका हुन् सि,ल्भि,या ब्राउनी ।
भविष्यवाणी गरिएको पुस्तक प्रकाशित भएको अर्को वर्ष नै ब्राउनीको ७७ वर्षको उमेरमा निध’न भएको थियो । उनी आफूलाई अलौकिक शक्ति भएको नारी मान्थिन् । भविष्यवाणी गरिएका पुस्तक लेख्थिन् । आध्यात्मिक पुस्तक लेखेर करोडौं कमाइन् ।
कतिपय आप’रधिक घट’नामा प्रहरीलाई सहयोग गरेको दाबी गर्थिन् । ह’राएका मानिस ज्युँदो छन् कि मरे’का छन् समेत भन्थ्नि । कतिपय घट’नामा उनले हरा’एको मानिस कहाँ छन् भनेर सत्य पत्ता लगाइदिएकी थिइन् । यसकारण पनि उनी आफूमा अलौकिक शक्ति भएको दाबी गर्थिन् । ब्राउनीसँग भविष्य जान्न चाहनेले कुरा गर्थे । उनीसँग आधा घन्टा कुराकानी गरेको सात सय डलर तिर्थे ।
भविष्यवाणी गर्ने ब्राउनीले ४० पुस्तकहरु प्रकाशित गरिन् । जसमध्ये भविष्यको बारेमा बढी उल्लेख थियो र बढी विक्री भएकामध्ये पर्दथे । उनका पुस्तकमध्ये सिक्रेट्स एन्ड मिस्ट्रिज अफ दी वल्र्ड, इफ यु कुड सी ह्वाट आई सी, इन्साइट र इन्ड अफ डेज बढी विक्री भएकामा पर्छन् । इन्ज अफ डेजमा नै उनले सन् २०२० मा नि’मोनिया जस्तै रोग फैलन लेखेकी थिइन् ।
१९ अक्टोबर सन् १९३६ मा सिल्भिया सुमेकरका रुपमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निमा जन्मिएकी सिल्भिया ब्राउनी तीन वर्षकै उमेरमा अलौकिक शक्तिकी थिइन् ।सिल्भिया ब्राउनीको पुस्तकले कोरोना भाइ’रस कसरी फैलन्छ र परिणाम के हुन्छ भन्ने समेतको भविष्यवाणी गरेको छ । पुस्तकले यो रोग जति छिटो आयो उति छिटो नै हराउने भविष्णवाणी गरेको छ । रोगले केहीवर्षपछि आक्र’मण फैरि गर्न सक्ने तर, पूर्ण रुपमा हराउ’ने भनेको छ । यसको अर्थ रोग चाँडै रहनेछैन ।
छिट्टै आउने र छिट्ट हराउने भविष्यवाणी गरिएको यो रो’ग कोरोना भाइ’रसको संक्र’मण हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । रोग छिट्टै आएको छ । यो छिट्टै फैलिएको पनि छ । रोग भविष्णवाणी गरेजस्तै छिट्ट हराउने र पूर्ण रुपमा निर्मुल हुने हो होइन प्रतिक्षाको विषय छ । ब्राउनीले दाबी गरेजस्तै उनी अलौकिक क्षमताकी हुन् भन्ने कोरोना भाइ’रस फैलिने भविष्यवाणी मिल्नुले बुझ्न सकिन्छ ।
थाइल्याण्डमा सरकारविरुद्ध स्कुले विद्यार्थीहरुको विशाल आन्दोलन
बैंकक : थाइल्याण्डमा यहाँका हाइस्कुलका विद्यार्थीले नेतृत्व गरेको प्रदर्शनमा हजारौँ मानिसले सहभागिता जनाएका छन् ।
अमेरिकी चुनावमा ट्रम्पको तमासा : जर्जियाबाट फेरि हारकाे खबर पाए
हार भोगेपछि चुनावी नतिजा बदल्न अनेक तिकडम गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई फेरि झट्का लागेको